Global Voices teny Malagasy » Fifangarona mahafaty: Ny fomba fampiasan’ny governemanta ao MENA ny lalàna mikasika ny heloka an-tambajotra sy ireo rindrambaiko mpijirika mba hikendrena ireo mpikatroka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Oktobra 2018 12:58 GMT 1	 · Mpanoratra Gulf Center for Human Rights Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Arabia Saodita, Bahrain, Emirà Arabo Mitambatra, Katara, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Zon'olombelona
Israa Al-Ghomgham tamin'izy mbola kely. Sary naparitaka be tamin'ny aterineto.
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Khalid Ibrahim  , tale mpanatanteraka ao amin'ny Ivontoerana ho an'ny Zon'Olombelona ao Gôlfa  (GCHR), fikambanana mahaleo tena tsy mitady tombontsoa izay mampiroborobo ny fahalalahana maneho hevitra, ny fanaovana fikambanana ary ny fivoriana am-pilaminana any amin'ny faritry ny Gôlfa sy ireo firenena mpifanolo-bodirindrina aminy.
Mety hiatrika ny fanamelohana ho faty atsy ho atsy ao Arabia Saodita i Israa Al-Ghomgham  , ilay mpikatroka ho an'ny Zon'olombelona, noho ireo hetsika tsy nisy herisetra nataony mifandray amin'ny resaka zon'olombelona.
Nosamborina tamin'ny 2015 niaraka tamin'ny vadiny, ilay mpikatroka Mousa Al-Hashim, noho ny anjara toeran'izy ireo tao anatin'ny hetsika fanoherana ny fanjakana tany Al-Qatif, nampangaina teo ambanin'ny andininy faha-6 ao amin'ny Lalàna mikasika ny Heloka an-tambajotra tamin'ny 2007 i Al-Ghomgham noho ny ”fikarakarana, fandefasana sy fitahirizana fitaovana izay mety hanakorontana ny filaminam-bahoaka”. Nampangaina ho ”nitarika famoriambahoaka sy tanora hanohitra ny fanjakana sy ny mpitandro filaminana tao anatin'ireo tranonkalan'ny tambajotra an-tserasera ihany koa izy”, ary nizara sary sy lahatsarin'ireny hetsika fanoherana ireny tamin'ny aterineto. Tany am-pigadrana foana izy nanomboka tamin'izany, ary nakarina fitsarana tamin'ny volana Agositra 2018 teo. Mangataka ny fanamelohana azy ho faty ireo mpampanoa lalànam-panjakana ho an'ny raharahany.
Mety ho avo kokoa ny fanamby amin'ny raharahan'i Al-Ghomgham. Fa lasa tena mahazatra tao amin'ny faritra MENA ny fisehon'ny fisamborana, ny fitazonana sy ny fanenjehana azy.
Teo amin'ny roapolo taona mahery teo, mampiasa fitaovana amin'ny aterineto ireo mpikatroka toa an'i Al-Ghomgham ao amin'ny faritra MENA mba hitakiana fiarahamonina demokratika manaja ny zo fototra sy hanehoana malalaka ny hevitra hafa izay tsy ekena any amin'ny haino aman-jery nentim-paharazana, izay matetika tantanin'ny fanjakana ny maro aminy.
Fa taorian'ny fifandimbiasan'ireo hetsika sosialy nanerana ny faritra MENA tamin'ny 2011-2012, nanoka-tena tamin'ny fanamafisana ny fifehezany ny aterineto sy ny fanangolena ny fampiasana izany mba hampiroboroboana ny zon'olombelona sy ny rariny ara-tsosialy ireo governemanta maro sy ny mpitandro filaminana any amin'izy ireny.
Any amin'ireo firenena izay naharaketan'ny vondrona maro mpiaro ny zon'olombelona ny fandikàna henjana ny zon'olombelona, toa an'i Arabia Saodita, ny Firaisan'ny Emirà Arabo (UAE), Bahrain sy Katar, nandany dolara an-tapitrisany maro ny governemanta ho an'ny fanarahamaso, fijirihana ary fitaovana fitsikilovana mba hikendrena ireo mpiaro ny zon'olombelona, isan'izany ireo mpikatroka anatin'ny aterineto sy ireo blaogera.
Ankoatra ireny fepetra ara-teknika noraisina ireny, nitady fomba fiasa ara-dalàna ihany koa mba hampandrosoana ity adiny ity ry zareo. Hita ao anatin'ny tetikadin'izy ireo ny fanaikena sy ny fampiharana hentitra ireo lalàna momba ny heloka an-tambajotra izay nampiasaina mba hanemporana ny fahalalahana maneho hevitra amin'ny Aterineto ary koa mba hanamelohana sy hanagadrana ireo mpikatroka.
Mampiseho ny fomba nitarihan'ity fifangaroana fepetra ara-teknika sy ara-dalàna ity hankany amina vanim-potoana famoretana vaovao ny tatitra iray vao haingana nataon'ny Ivontoerana ao Gôlfa ho an'ny Zon'Olombelona (GCHR) izay mitondra ny lohateny hoe ”‘Fametrahana an-tsarintany ny lalàna momba ny heloka an-tambajotra sy ny fandikana ny lalàna niomerika ao amin'ny Gôlfa sy ny firenena manodidina ”.
Asongadin'ilay tatitra ireny fironana ireny ary vinavinainy fa mety hampitombo ny fahafahany manenjika ny ”heloka an-tambajotra” toy ireny ireo governemanta ao amin'ny faritra:
Vinavinainay fa hisy fironana roa hihamaro ary voatery izahay hampitandrina momba izany. Voalohany, hampiditra faneriterena maro amin'ny fahalalahana miteny sy maneho hevitra, ambanin'ny marika fanoherana ireo ‘fakom-baovao’ ny lalàna. Faharoa, satria efa nandrafitra sampana roa naompany amin'ny fanenjehana ireo heloka an-tambajotra, izany hoe ny polisy sy ny fitsarana, ny UAE sy i Siria, dia mety hanaraka izany koa ireo firenena hafa.
Ankoatra ny fampiasana ny lalàna momba ny heloka an-tambajotra ho toy ny fiarovana tsy ara-drariny nefa eken'ny lalàna mba hikendrena ireo mpikatroka, mampiasa orinasa vahiny ireo governemanta sy sampandraharaha misahana ny fiarovana, izay matetika mipetraka any amiin'ireo demokrasia Tandrefana, mba hamatsy azy ireo rindrambaiko sy fitaovana hiaka farany.
Nivarotra fitaovana fanaovana sivana tamin'ny fanjakana UAE mba hanakanana tranonkala, ka anisany ny GCHR, izay efa nosakanana  tao amin'ny firenena hatramin'ny Janoary 2015, ny orinasa Kanadiana Netsweeper  .
Ankoatra ny fitantanana sy fanarahamaso ny fihetsika anaty aterineto ataon'ireo fikambanana amin'ny fiarahamonina sivily, efa nandraman'ireo mpisehatra avy amin'ny governemanta ny hijirika ny kaontin'izy ireo sy ny hahazo ireo rakitra mety saropady ao anatin'izany.
Amin'izao fotoana izao, mamita ny saziny folo taona an-tranomaizina ao amin'ny UAE i Ahmed Mansoor, ilay mpikatroka ho an'ny zon'olombelona. Tompon'ny sary: Martin Ennals Foundation, tao amin'ny Citizen Lab.
Lasibatry ny rindrambaiko mpijirika  fantatra amin'ny anarana hoe Finfisher ary namidin'ny Gamma International izay orinasa ao UK sy Alemaina i Ahmed Mansoor , ilay blaogera Emiraty sady mpiaro ny zon'olombelona mamita ny saziny 10 taona an-tranomaizina ankehitriny noho ny fanehoany ny heviny an-tambajotra. Milaza ihany koa ireo fikarohana ara-teknika fa lasibatry ny rindrambaiko novokarin'ny orinasa Italiana, Hacking Team, i Mansoor.
Tamin'ny taona 2015 fotsiny, nampiasa  ilay rindrambaikon'ny Hacking Team izay novidiany 634,500$ ny manampahefana ao amin'ny UAE mba hanarahana maso olona 1.100. Tamin'ny 2016, lasibatry  ny ezaka fanapaingorana indray i Mansoor izay tamin'ity indray mitoraka ity, nampiasàny ny teknolojian'ny orinasa Israeliana NSO Group.
Manerana ny faritra, rehefa voasambotra ilay mpiaro ny zon'olombelona sy ireo mpikatroka an-tambajotra, alaina amin'izy ireo avokoa ny fitaovana elektronikany sy ny an'ireo fianakaviany. Rehefa nosamborina tamin'ny volana Martsa 2017 i Mansoor, nalain'ny manampahefana avokoa ny finday sy solosainan'ny zanany. 
Satria mbola mitohy tsy an-kijanona ireo fepetra famoretana manerana ny faritra MENA, tokony haka fepetra manoloana ireo orinasa mandray anjara amin'ny famoretana toy izany ireo governemanta any amin'ny demaokraisa Tandrefana. Mila mametraka fanarahamaso ireo orinasa misahana ny fiarovana niomerika mba hanakanana azy ireo tsy hanondrana teknolojia fanaovana sivana, fanakanana sy fijirihana mankany amin'ireo governemanta mpamoritra ireo governemanta ao anatin'ny Firaisambe Eoropeana, Etazonia sy Kanadiana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/24/125769/
 Khalid Ibrahim: https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=mg&u=https://twitter.com/khalidibrahim12&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhiYaEHNccD_C092_vF7ni1qHtbzwg
 Ivontoerana ho an'ny Zon'Olombelona ao Gôlfa: https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&tl=mg&u=http://www.gc4hr.org/&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhh4X45V8XPoFELci2AN8UrSHxFcOw
 ‘Fametrahana an-tsarintany ny lalàna momba ny heloka an-tambajotra sy ny fandikana ny lalàna niomerika ao amin'ny Gôlfa sy ny firenena manodidina: https://www.gc4hr.org/report/view/78
 Lasibatry ny rindrambaiko mpijirika: https://www.nytimes.com/2016/05/30/technology/governments-turn-to-commercial-spyware-to-intimidate-dissidents.html
 ny finday sy solosainan'ny zanany.: https://www.gc4hr.org/news/view/1875